SomaliTalk.com » Talooyinka beeshu ma anfacayaan tolweynaha
Waxaan dhawaan dib u akhriyey qoraallo farabadan (oo aan la faafin) oo aan dad kala duwan u diray sagaalkii sano ee ugu dambaysey. Waxaan si gaara u danaynayey waxyaabihii aan ka qoray dhacdooyinkii ka soo bilowday 18/02/2006. Laakiin waxyaabaha aan helay waxaa ka mid noqday baaq talobixin ah oo ay rag soo xajiyey u direen beesha ay ka dhasheen, waana xajkii ku beegnaa 1426/2005. Qoraalka waxaa magaalada Makka laga diray talaada 26 Dulxijja 1426 oo ku beegnayd 01/26/06 6:36 PM . Baaqaas waxaa soo saaray rag isku qoys ah, waxayna si gaara ugu jeediyeen beeshii ay ka dhasheen, laakiin markaan akhriyey waxaa ila qummanaatay inaan sidiisa ku faafiyo; waayo waxa uu ka hadlayo waa wax dadkeenu u wada baahanyahay. Culumada tafsiirku markay ka hadlayeen nas-ka ku soo daga dhacdo gaar ah laakiin si guud u hadlaya, waxay dheheen: “waxaa tixgalinta leh macnaha guud ee eraygu xambaarsanyahay ee tixgalinta ma leh sababta gaarka ah ee uu ku soo dagay” , waana hubaa inaan rag beelo kale ah u gudbiyey afkaarta baaqaan ku jirta qaar badan oo ka mida; si ay beelohooda ugu gudbiyaan. Ragga aan xusuusnahay in aan u gudbiyey waxaa ka mida Alle ha u naxariistee Maxamed Tahliil Warsame oo dadaal badan ku bixin jirey siduu xigtadiisa iyo ummaddoo dhan wax ugu qaban lahaa. Waxaan rajeynayaa in raggii afkaartaan soo jeediyey Ilaahay ajar ka siiyo cid kasta oo afkaartooda ka faa’iidaysata illaahay ku anfaco. Baaqii xujeyduna sidaan ayuu u qornaa:
Salaan ka dib walaalayaal waxaan idiinku hambalyaynaynaa munaasabadda Ciidda barakaysan ee Al-Adxaa, waxaana Alle ka baryaynaa in uu inaka aqbalo camalka suubban, sannadkaan kiisa kalena uu inaku gaarsiiyo khayr iyo baraare, muslimiintana dhamaan uu xafido, sarena u qaado adduun iyo aakhiroba. Walaalayaal waxay u suurta gashay inay kulan ku yeeshaan magaalada barakaysan ee Makka Al- Mukarrama Xujaydii Leelkase ee sannadkaan timid Xajka, xujaydaasi oo ka kala yimid: Soomaaliya, Careebiya, East Africa, Yurub iyo W/America. Xujaydu waxay is waraysi ka dib kulankoodaas ku falanqeeyeen amuuro farabadan oo khuseeya danta iyo horumarka beesha Leelkase meel kasta oo ay joogaanba, waxayna si gaar ah xoogga u saareen deegaannada beesha ee asalka ah, ugu dambayntiina waxay xujaydu shirkoodaas ka soo saareen baaq iyo talooyin ay u jeediyeen bulshada reer Leelkase, waana kan qodobadiisii: Baaqa Xujayda:
8. Waxaan si gaar ah mar labaad u boorrinaynaa, una codsanaynaa in si dhab ah loo walaaloobo, lagana fogaado wax kasta oo dhaawacaya walaalnimada iyo wadajirka, isla markaana la noqdo talo wadaag isu kaashada khayrka iyo Alle ka cabsiga, iskana celiya dambiga iyo xadgudubka.
9. Waxaan u hambalyaynaynaa dhammaan beesha Leelkase, gaar ahaan Suldaan Subeyr oo aan rajaynayno in uu wax weyn ku soo kordhiyo beesha Leelkase meel kasta oo ay joogto.10. Ugu dambayntii waxaan ku talinaynaa in aqoonyahanka beeeshu iska kaashadaan sidii loo samayn lahaa qorshe ballaaran oo lagu hormarinayo beesha meel kasta oo ay joogto, taana waxaa saldhig u ah in ay si buuxda wax isula fahmaan aqoonyahanka iyo hoggaanka beeshu.